Sheekh Abuu Muscab "Annaga iyo ONLF Meel islama galnno Mana iska barbar dagaalamin" Dhageyso.
Monday June 09, 2014 - 03:30:20 in Wararka by Super Admin
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa beenisay warar maalmihii lasoo dhaafay ay ku hadaaqayeen saraakiisha amxaarada Kaba qaadka u ah ee ku sugan gobolka Bakool oo ku aadanaa iyo dagaalyahanno katirsan ONLF ay ka barbar dagaalameen Al Shabaab.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa beenisay warar maalmihii lasoo dhaafay ay ku hadaaqayeen saraakiisha amxaarada Kaba qaadka u ah ee ku sugan gobolka Bakool oo ku aadanaa iyo dagaalyahanno katirsan ONLF ay ka barbar dagaalameen Al Shabaab. Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa beenisay warar maalmihii lasoo dhaafay ay ku hadaaqayeen saraakiisha amxaarada Kaba qaadka u ah ee ku sugan gobolka Bakool oo ku aadanaa iyo dagaalyahanno katirsan ONLF ay ka barbar dagaalameen Al Shabaab.
Sheekh C/Caziiz Abuu Muscab Afhayeenka ciidanka Shababul Mujaahidiin ayaa waxba kama jiraan ku sifeeyay sheegashada cadawga ee ah in dagaalkii Deegaanka Caato ka dhacay ay mujaahidiinta kala qeyb galeen ONLF!.
Taliska ciidanka Al Shabaab wuxuu sheegay in iyaga iyo ONLF aysan wax xariir ah ka dhaxayn islamarkaana ONLF mamnuuc tahay wilaayaadka islaamiga ah.
"Warkaasi waa been cadawga ayaa faafiyay Annaga iyo ONLF Meel islama galno waana Kooxo diin laawayaal ah oo mamnuuc ka ah dhulka Mujaahidiintu maamulaan”ayuu yiri Sheekh Abuu Muscab.
Dowladda Itoobiya ayaa markii sida xun loogu jebiyay saraakiisha soomaalida ee dabadhilifka u ah ku amartay in ay warbaahinta ka sheegaan "ONLF iyo Al Shabaab ayaa Bakool isku garabsaday”.
Halkan ka dhageyso Sheekh Abuu Muscab oo Alfurqaan wareysi siiyay MP3